A place to say something: ကောင်မလေးနှင့် သူမ၏ညစာ
နိုင်ငံတစ်ခုစီတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာထုံးတမ်း အစဉ်အလာတွေအရ အနေအထိုင် အပြောအဆို အစားအသောက် အပါအ၀င် စားသောက်သည့်ပုံစံချင်းလည်း မတူကြပါဘူး.. အနောက်တိုင်းလူမျိုးတွေက ဇွန်း၊ခက်ရင်းနဲ့ စားကြပြီး မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ အပါအ၀င် အာရှတ၀ှိုက်က လက်ဖြင့် စားလေ့ရှိပါတယ်။ ထူးခြားတာက တရုတ်အပါအ၀င် တရုတ်မျိုးနွယ်ဝင် ကိုရီးယား၊ဂျပန် တွေကတော့ “တူ” ဟု မြန်မာလိုခေါ်လေ့ရှိသော ၀ါးဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် တုတ်နှစ်ချောင်းဖြင့် စားလေ့ရှိပါ၏။
ကြုံတုံးပြောဦးမယ်.. ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်ဆိုတာတည်ထောင်စဉ်ကတည်းက မိုးနဲဒေသ အလယ်ပိုင်းကစပြီး တိုင်ပြည်တခုရယ်လို့ ဖြစ်လာတော့ ရေနဲနဲရှားတယ်.. အဲဒီတော့ အ၀ှာစွန့်ပြီး ကိစ္စ၀ိစ္စပြီးရင် တုတ်နဲ့ Clean လုပ်ပါသတဲ့.. ရှေးမြန်မာများ ညစ်ပတ်သည်ဟု မထင်စေချင်ပါ.. သူတို့လဲ သူ့နည်းသူ့ဟန်ဖြင့် သန့်ရှင်းအောင် အဖြေရှာခဲ့ကြခြင်းသည်သာ..
ထားပါတော့(ဒါလဲသူသုံးနေကြစကားတစ်ခုပါ)၊ တရုပ်ပြည်၏ မည်သည့်မင်းဆက်မှ စတင်၍ “တူ” ကိုသုံးစွဲခဲ့ပါသနည်း? ဘာကြောင့် အစားတလုပ်စားရဖို့အရေး ဒီတုပ်တွေနဲ့ ခဲရာခဲစစ် စားသောက်ကြပါသနည်း..? Wikipedia တွင်ရှာကြည့်ပါသေးသည်၊ ခိုင်လုံသော အထောက်အထား မတွေ့ရပါ။ ဒီကသတ္တ၀ါတွေ နေ့စဉ် “တူ” နဲ့စားတာကြည့်ပြီး ငယ်ငယ်က မည်သူပြောပြခဲ့သည်မသိသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို သတိရမိပါ၏။
ဒီလိုဗျ... ကျုပ်တို့ ရှေးမြန်မာရာဇ၀န်မှာ “ငတက်ဖြား” ဆိုတဲ့သူခိုးကြီးဟာ အခြားသောသူခိုးများနှင့်မတူဘဲ သူမတူအောင် ကျွမ်းကျင်ပါသတဲ့.. ဒါနဲ့ဘဲ ခိုးလွန်းလို့ မြန်မာရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့ ရွှေနားတော်ထိရောက်အောင် တိုင်တန်းမှုများ ရှိလာပါလေရော... ထုံးစံအတိုင်းပေါ့၊ ဘုရင်ကြီးကိုတိုင်တော့ သူခိုးဘယ်ဖမ်းပါ့မလဲ (သူခိုးမပြောနဲ့ ခြင်တောင်မိအောင်ဖမ်းဘူးတာမဟုတ်ဘူး၊ သူများကခြင်မကိုက်အောင် ဘေးက ယက်ခတ်ပေးရတာ)
“အမိန့်တောမှတ်မယ် နာခံစေဗျား.. ယ္ခုတလောတွင်း “ငတက်ဖြား” အမည်ရ သခိုးကြီးဟာ ငါကိုတော် အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလ၌ တိုင်းသူပြည်သားတို့၏ အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ခိုးဆိုးသောင်းကြမ်းနေသည်ဟု ငါကိုယ်တော် ကြားသိရတော်မူသည်။ ယ္ခုချိန်မှစ၍ ငါ၏ရှေ့တော်သို့ရောက်အောင် အမြန်ဆုံး ဖမ်းစည်းခေါ်ဆောင်လာရမည်။ အမိန်တော်....”
ဟီး.. အဲဒီလို ပြောမယ်ထင်တာပဲ.. :) ရမ်းတုပ်ကြည့်တာ.. ကဲကဲ..ရှေ့ဆက်စို့.. ဒါနဲ့ပဲ ဘူးသီးပတ်.. အဲယောင်လို့ မှူးကြီးမတ်ရာတို့လဲ ဆင့်ကဲအမိန့်တော်တွေ နေရာအနှံ့ ဖြန့်ထုတ်ရတယ်ပေါ့ဗျာ.. ခုခေတ်လို email တွေ gtalk တွေမှမရှိဘဲ.. လူကိုယ်တိုင်ပဲ သွားကြပြောကြပေါ့... ဒီလိုနဲ့ သူခိုးကြီးကို ထောင်ချောက်ဆင်ပြီး ဖမ်းကြတာ အင်မတန်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူခိုးကြီးလဲ ခိုးပဲခိုးတတ်ပြီး မပြေးတတ်တော့ မိသွားတယ်ဆိုပဲ.. ပြီးတော့ ရှင်ဘုရင်ကြီးရှေ့တော်မှောက် ဖမ်းစည်းပြီး ခစားစေသတဲ့..
“ဟေ့... ငါကိုယ်တော်၏ ရှေ့တော်မှောက့် ခေါင်းငုံခစားနေတာ ဘယ်သူလဲကွယ့်..”
သူပဲ သူခိုးဖမ်းဆိုလို့ ဖမ်းခေါ်လာတာ မြင်ရဲ့သားနဲ့ မေးနေရသေးတယ်.. ဪ.. ရှင်ဘုရင်ပေပဲ.. နဲနဲတော့ ပဲများပေမပေါ့..
“မှန်လှပါဘုရား.. ကျွန်တော်မျိုးကြီး ငမိုက်သား သူခိုးကြီး ငတက်ဖြား ပါဘုရား..”
အောင်မာ.. သူခိုးက နုသေးတယ်.. ဓမြရုပ်နဲ့ အခြောက်လုပ်ချင်သေးတယ်... ကြုံတုံးတွယ်ကြည့်တာ... အလျှောက်ကောင်းရင် အထောင်းလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံကြားဖူးထားပုံရသော သူခိုးကြီးကဘဲ ဆက်ပြီး...
“မှန်ရာကို တင်ပါသည် ဘုရား.. မလိမ္မာ အခါတရာမိုက်လေးမို့ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဘုရား... အရှင်မင်းကြီး အမျက်တော်ရှ၍ သတ်ရင်လဲ သေရမည့်သူပါဘုရား.. သနားသဖြင့် အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးမှ ရှင်ရမည့်သူပါဘုရား.. အရှင်မင်းကြီးလက်ခုပ်တော်မှ ရှူရှူးလိုပါပဲဘုရား.. ရှူလိုကရှူ.. သောက်လိုက သောက်..” အဲ အဲ.. ဖောတာ လွန်ကုန်ပြီ...
တကယ်တမ်းကြတော့ ဘုရင်ကြီးဟာ သူအုပ်စိုးစဉ်ကာလတွင်း အလွန်ကြီးမားသော အပစ်မှလွဲ၍ “သတ်စေ” ဟူသော အမိန့်ကို တတ်နိုင်သလောက် မသုံးချင်တဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်သတဲ့.. ဒါ့အပြင် ဘာသာတရားကို အလွန်ကြည်ညိုပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ကိုယ်တိုင်မဖူးရလို့ ဓတ်တော်မွေတော်တို့ကိုဘဲ ဘုရားရှင် သက်ရှိထင်ရှား ရှိသကဲ့သို့ ရည်မှန်းပြီး အလွန်ကြည်ညိုလေးစားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သတဲ့... အဲ.. ဒါ့အပြင် တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ သံတမန် သတင်းတော်အရ တရုတ်နိုင်ငံမှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဓတ်တော်မွေတော်ဖြစ်သော စွယ်တော်မြတ်တစ်ဆူ ရှိတယ်ဆိုတာကို သိထားလေရဲ့… ဒါနဲ့ပဲ…
“ကဲကဲရှိစေတော့ မောင်မင်းငတက်ဖြား၊ သို့သော်လည်း သင်သည် ခိုးသည့်အတတ်ပညာတွင် အလွန်ကျွမ်းကျင်သည်ဟု ကျုပ်သိရှိရတော်မူသည်။ သင်၏ ခိုးသောအမှုတို့ ပြေပျောက်စေခြင်းငှာ တရုပ်ပြည်တွင် ရှိသည့် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဓတ်တော်မွေတော်ဖြစ်သော စွယ်တော်မြတ်ကို သင်၏ပညာဖြင့် ငါ၏ ဘုရားကျောင်းဆောင်တော်သို့ ပင့်ဆောင်တောင် မူလာရမည်” ဟု စိတ်ထဲရှိရာ အမိန့်တော်ကို မှတ်လိုက်ပါလေသတဲ့…
ငတက်ဖြားကြီးခမျာလည်း တသက်နှင့်တကိုယ် တစ်ခါမှ တရုတ်ပြည်ရောက်ဖူးတာ မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်… ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ…. ငတက်ဖြားဆိုတာကလည်း နာမည်တလုံးနဲ့ နေတာမဟုတ်လား.. သူခိုးတို့မည်သည် ရအောင်ခိုးနိုင်ရမည်ဟူသော မလျှော့သော ဇွဲ၊လုံးလတို့နှင့် တရုတ် သိုင်းဝတ္တုထဲကအတိုင်း မည်သို့မည်ပုံ ပြုလိုက်သည်မသိ.. တရုတ်ဘုရင်ကြီး၏ နန်းဆောင်ထဲကို ရောက်သွားတယ်ဆိုပဲ.. တရုတ်ဘုရင်ကြီး တရုတ်အရက်တွေ သောက်ပြီး အိပ်မောကြနေချိန်မှာ ငတက်ဖြားကြီးဟာ စွယ်တော်မြတ်ကို ခိုးယူပင့်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသတဲ့.. ဒါနဲ့ ပြန်မယ်အလုပ်မှာ သွားလေးနှစ်ချောင်း ရှေ့ကိုအတန်ငယ် ခေါနေပြီး တခေါခေါနဲ့ အိပ်မောကျနေတဲ့ ဘုရင်ကြီးကို ကျီဆယ်လိုတာနဲ့ ပါလာတဲ့ ကွန်းအစ်ထဲက ထုံးတစ်တို့ယူပြီး ဘုရင်ကြီးရဲ့နှဖူးမှာ သူ ခိုးယူသွားမှန်း သိအောင် “ငတက်ဖြား” လို့ ရေးခဲ့ပါလေရော.. တော်တော်နောက်တဲ့ကောင်.. ဟီး.. ကျုပ်လိုပဲ..
နောက်တနေ့ တရုတ်ဘုရင်ကြီး ညီလာခံကျင်းပတော့ ဒီလောက်စစ်တပ်တွေ အထပ်ထပ် စောင့်ကြပ် ထားတဲ့ကြားက သူကိုးကွယ်ရာ စွယ်တော်မြတ်ကို ခိုးယူခံရတဲ့အပြင် နှဖူးမှာပါ စာရေးခံရတော့ တော်တော့ကို ဒေါသ တွက်နေလေရဲ့…
“၀ သိစိတ်စိုးလယ်.. ၀ ပစ်စီးကိုလည်းခူးလယ်.. ၀ကိုလည်း စူစူကားကား နှီဖူးမှာ စာရီးလယ်.. ၀လို့ စီလုပ်တွေ တီလောက် ညံ့ရလား.. တီနေ့ကစပီး မြီမာတွီ ချီးကူးလဲ့တုတ်နဲ့ပီး ထီမင်းစားကြလော့” ဆိုပြီး အလွန်ပြင်ထန်တဲ့ အမိန့်ကို ချလိုက်ပါလေရော…
အဲဒီအချိန်ကစပြီး တရုတ်တွေ “တူ” နဲ့စားတဲ့ အလေ့အထ ဖြစ်လာပါသတဲ့ကွယ်.. ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲ.. မောင်ညီမလေးတို့ တတွေလဲ “တူ” နဲ့စားသောက်တိုင်း ဒီပုံပြင်လေးကို အမှတ်ရကြပါကွယ်….
ဪ.. ဒါနဲ့ ကျွန်တော့ကောင်မလေးရဲ့ ညစာကိုရော သူမဘယ်လိုစားသုံးနေပါသလဲ…?
“တူ” နဲ့မစားဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းမိပါ၏။ ။
Posted by ko ye at 2:21 AM
Labels: Jokes, သို့... ကောင်မလေး
ako kgmalay ka ,,nga saraphit khaut swal ko sarr mal so yin tot "tu" nae sar mar tay char par tal.....:P ahee
သင်ဤသို့ စမ်းသပ်ဖူးပါသလား ?
မြန်မာ Blog ရေးသူများ
သူတို့ပြောသော သူတို့အမြင် (သို့) ကျွန်တော့အကြောင်း...